Major General Abraham W/mariyam Iyo 5 Sarkaal Oo Maanta La Gudoonsiiyay Darajo Aad Usaraysa Iyo Madaxwayne Cabdi Maxamuud Oo U Hanbalyeeyay. - Cakaara News
Addis Ababa(CN) Isniin13.Oct.2014, Madaxwaynaha dalka Dr Mulatu Teshome, R/wasaare Hailemariam Desalegn iyo General Semora Yonis ayaa waxay maanta gudoonsiiyeen 6 sargaal oo ciidanka qaranka ah darajoon sare aad muhiim u ah kuwaas oo uu ugu horeeyo Abraham W/mariyam oo maanta loo dalacsiiyay Letanant jeneraal (Lieutenant general) darajada loo yaqaano.
R/wasaare Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in ay dalacsiintan saraakiishu ay ku mutaysteen guulo wax ku'ool ah oo ay soo hoyiyeen.
Munaasibadan oo si aad ah loo soo agaasimay ayaa lagu beegay si loo wayneeyo xuska maalinta calanka qaranka oo maanta guud ahaanba dalka loo dabaal dagayay.
Sidoo kale madaxwaynaha dalka ayaa sheegay in darajada maanta lasiiyay saraakiishan ay kadhigantahay mid shacabka Itoobiya lasiiyay.
Sida lawada ogsoonyahay ciidanka qaranka Itoobiya waxay guulo kasoo hoyiyeen dalka gudihiisa iyo dibadiisaba nabadgalyada iyo horumarka.
Jeneraal Samora Yoonis ayaa wuxuu marar badan ku amaanay Gen. Abraham guulaha uu kasoo hoyiyay shaqooyinkii loo xilsaaray gaar ahaan tirtirida cilmiyaysan ee UBO, Alqushaash iyo OLF ee ku dhuumaalaysan jirtay DDSI.
Guud ahaan waxaa maanta si heer sare ah loo dalacsiiyay Jeneraal Abraham iyo 5 sargaal oo kale taaso ay shacabka reer Itoobiya soo dhaweeyeen. Dhanka kale arintan ayay dad badani ku tilmaameen in ay kadhigantahay in cidkasta oo shaqo latimaada ay heli waxay mudanyihiin. Wuxuuna Raysal wasaare HaileMariam Desalegn sheegay in ay ku mutaysteen dalacsiintan shaqooyinkii ay qabteen.
Waxaana aad ugu hanbalyeeyay dalacsiinta saraakiishan madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.